Bangladesh, Pakistàna ary Amazonia, ventesin’ireo vehivavy indizeny ilay hira “Misy mpanolana eo amin’ny làlanao” · Global Voices teny Malagasy
Lasa manerantany ny fiantraikan'ilay hetsika tselatra teraka tao Chili
Mpanoratra Melissa Vida, Rezwan Nandika (fr) i Marie Kéïta, avylavitra
Voadika ny 28 Febroary 2020 2:59 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, Italiano, Português, Ελληνικά, English
Pikantsary avy amin'ilay lahatsary YouTube novokarin'ny Hetsiky ny Tanora Mpianatry ny Oniversiten'i Dhaka
[Mitondra mankany aminà pejy miteny anglisy ny rohy rehetra raha tsy asiana fanamarihana manokana]
Mbola mitohy misy fiantraikany manerana izao tontolo izao ilay hetsika tselatra teraka tao Shily sy lasa niparitaka be, natao hiarovana ny vehivavy ary mitondra ny lohateny hoe “Misy mpanolana eo amin'ny làlanao” (Un violador en tu camino amin'ny teny espaniôla), satria manainga ireo vehivavy hiampanga ny fanararaotana ara-nofo sy ny filambaniny.
Ny iray tamin'izy ireny dia nitranga tao Bangladesh, toerana iray nisy olona an'arivony nihetsika nanohitra ny fanolànana tovovavy iray mpianatry ny oniversiten'i Dhaka. Marobe ireo mpanao fihetsiketsehana no niventy ny dika amin'ny fiteny Bengali an'ilay hira Misy mpanolana eo amin'ny làlanao.
Tsy ahy ny hadisoana, tsy ny teniko, tsy ny fitafiko, tsy ny toerana.
Ianao no mpanolana
pikantsarin'ilay lahatsary YouTube nakarin'i Rahul Talukder.
Tamin'ny 6 Janoary no nitranga ilay hetsipanoherana, teo anoloan'ny Tranombakoka Nasiônalin'i Bangladesh, eo akaikin'ny toerana fonenan'ny mpianatra.
Nihoatra ny 500 ireo tranga fanolànana sy fanararaotana ara-nofo naharaisana tatitra tao amin'ny faritra be mponina ao Dhaka tamin'ny 2019.
Nisy fantsom-pahitalavaitra iray ety anaty tambajotra nanatontosa rakitsary iray miaraka amin'ilay hira amin'ny fiteny Bengali nataony feo lafika tamin'ireo zava-niseho tany aminà firenena marobe. Tsy nandefa azy ireny ireo goavan'ny famoahana vaovao, saingy lasa niely patrana teny anaty tambajotra sosialy izy ireny.
Ao anaty lahatsary iray hafa, hita manao fihetsika ireo mpianatra sasantsasany no sady miventy io hira io, any aminà toerana sy fotoana tsy mitovy.
Hatreto dia olona iray noahiahiana tamin'ny resaka fanolànana no nosamborin'ny polisy.
Avy ao Shily ary mipàka erantany
Lasa hira fanevan'ireo mpiaro ny vehivavy [fr] ny “Misy mpanolana eo amin'ny làlanao” taorian'ny nihiràn'ireo Shiliàna azy sy nanaovan'ny Las Tesis, ilay fikambanana mpiaro ny vehivavy, dihy mirindra tamin'ny 25 Novambra 2019, tao anatin'ilay hetsiky ny daholobe hanoherana ny tsy fitoviana ara-toekarena izay nipoaka iray volana talohan'izay.
Marobe ireo herisetran'ny polisy naharaisana tatitra nandritra ireny hetsipanoherana ireny. Ilay hira, efa voasoratra talohan'ny nanombohan'ilay hetsika sôsialy, dia valinkafatry ny feminista (mpiaro ny vehivavy) amin'ireo herisetra, satria araka ny voalazan'ny Human Rights Watch [fr], manodidina ny 17% amin'ireo fitarainana voapetraka eny amin'ny fanenjehana ady heloka itoriana ireo manampahefam-panjakàna dia miaty fanararaotana ara-nofo avokoa.
Teraka avy amin'ilay hetsika tselatra ny aingampanahy ho an'ireo vehivavy ao Meksika, Kôlômbia, Kenià, India, manerana an'i Eoropa sy Etazonia hiampanga ireo karazana herisetra mitovitovy amin'izany.
Vehivavy indizeny avy ao Amazonia, avy amin'ny foko kichwa, shuar, waorani, achuar ary shiwiar, no nanatontosa ity seho ity :
Hira faneva feminista iraisanà firenena maromaro
Ny asa vitan'ilay teratany arzantina sady profesora feminista, Rita Laura Segato [fr] no fototra nakàna aingampanahy tamin'ilay seho, ary tanjon'ny fikambanana Las Tesis tamin'izany ny hanaporofo hoe “tsy tranga miavaka ho anà vehivavy tokana akory ny fanolànana fa endrika olana sôsialy iray midadasika kokoa”, hoy ny fitateran'ny Quartz.
Araka izany dia andrim-panjakana no tena kinendrin'ilay hira — “ny pôlisy, ireo mpitsara, ny Fitondràna, ny filoha” araka ny lazain'ny tonony — raisina ho mpiray tsikombakomba amin'ny herisetra mpanavakavaka vehivavy.
Athanasia Francis, izay manomana dôktôra momba ireo herisetra atosiky ny fanavahana ao Royaume-Uni, no manoritsoritra ao anaty lahatsorany ho an'ny The Conversation hoe nahazo laka eo amin'ny sehatra iraisampirenena ny filalaovana ny “Misy mpanolana eo amin'ny làlanao” satria olana iraisan'ny firenena maro io herisetra ara-drafitra mifototra amin'ny fanavakavahana io.
Io valinkafatra feminista iraisana firenena maromaro io, amin'ny endrika hira, dia nisafidy ny firaisankina sy ny fiombonam-po amam-panahy rehefa fotoanan'ny olana pôlitika. Antso ho amin'ny fanekena ny fisian'ny herisetra ara-nofo io, amin'ny maha-olana erantany sy ara-drafitra azy any anivon'ireo andrim-panjakana demaokratika izay, mahatsikaiky, noforonina indrindra hisorohana azy ireny.
Ho an'ilay Espaniôla mpanao gazety, Marta Borraz [es], noho ireo tonony toy ny hoe “Tsy ahy ny hadisoana, na ny fitafiko, na ny toerana” dia afahan'ilay hira ihany koa ireo vehivavy mba tsy ho voafatotry ny fihetsehampo manameloka ny tenany, fihetsehampo rehefa ry zareo iharan'ny herisetra ara-pilàna :
Nafantoka tamin'ny maha-tsimatimanota ny herisetra ara-nofo ny seho. Lasa hiaka iraisana ilay izy, izay manenika ny habaka natao ho an'ny daholobe, endrika irain'ny fanadiovana izay zava-mitambesatra ary mampivondrona fihetsehampo marobe mba hanovàna ny fomba fijery ny zavatra rehetra, indrindra fa ny fomba fijery ny hadisoana.
Tany Kolkata (Calcutta), New York sy Karachi
“Misy mpanolana eo amin'ny làlanao” ihany koa dia nohiraina ho fanoherana ny fitsidihan'ireo manampahefana mitàna toerana ambony amin'ny pôlitika. Ny 8 Janoary 2020, nisy fikambanana feminista indiàna iray niventy ilay hira tao Kolkata, teny an-tsisin'ireo hetsipanoherana marobe, nanoherana ny fahatongavan'ny Praiminisitra Narendra Modi tao an-tanàna.
Aopala Banerjee, iray tamin'ireo vehivavy nanatontosa ny seho, dia nanambara tamin'ny Scroll.in hoe “tian'ilay vondrona ny hampahafantatra ny rehetra ny herisetra ateraky ny fiahian-dehilahy izay hita taratra amin'ny vinan'i M. Modi hametraka fanjakana Hindou (Hindu Rashtra)”.
Tao New York, tsy ela akory izay, noventesin’ ireo vehivavy ilay hira faneva, teo anoloan'ny tribonaly nitondràna an'i Harvey Weinstein [fr], ilay mpamokatra sarimihetsika fahiny tao Hollywood ary vehivavy efa ho 100 no miampanga azy ho anao herisetra ara-nofo, mba hotsaraina noho ny resaka fanolànana.
Tao Karachi, niventy ilay hira faneva, fa tamin'ny teny ourdou, ireo vehivavy pakistaney avy amin'ny hetsika AuratMarch2020. Miantso ny vahoaka izy ireo mba hanatevina ny laharany ny 8 Martsa 2020 izao, Andro Erantany natokana ho an'ny Vehivavy, ka hanao diabe “ho an'ny rariny ara-toekarena, ny fananahana, ny tontolo iainana ary ny zon'ny tanànantsika”, araka izay afaka jerena ao amin'ny kaonty Twitter-ndry zareo.
Nandika (fr) i Marie Kéïta